Nigeria: Mataano isku dhegganaa oo la kala jaray - Bandhiga Media
Nigeria: Mataano isku dhegganaa oo la kala jaray
News Service January 12, 2020
Laba gabdhood oo ah mataano ku dhashay iyagoo isaga dheggan xabadka iyo caloosha ayey dhaqaatiirta ku guuleysteen inay qalliin ku sameeyaan, magaalada Abuuja ee caasimadda Nayjeyriya.
“Labada hablood oo lagu kala magacaabo Mercy iyo Goodness Ede, ayaa hadda caafimaad qaba, oo u diyaar ah inay guryahooda ku noqdaan” ayuu sheegay Emmanuel Ameh.
Mataanaha ayaa ifka ku soo biiray 13 ki, bishii August ee sanadkii tegay 2019.
Qalliinka gabdhaha matanaaha ah waxaa la fuliyay bishii November ee sanadkii hore, balse baahinta sheekadooda waxaa lala sugay in la hubiyo badqabkooda kadib camaliyadda. Waa markii ugu horreysay oo isbitaalkan takhasusiga ah uu fidiyo adeeggan oo kale. Ayuu telefishanka CNN ka soo xigtay Dr. Tayo Haastrup.
Sawirka gabdhaha bishii December kadib markii lagu guuleystay qalliinkooda.
Ku dhowaad 13 saacadood ayey qaadatay fulinta qalliinka, waxaana ka qeybgalay kooxo ka kala shaqeynayay labo saalo -Sariirta qalliinka.
“Waxa aan ku faraxsanahay oo aan ku faaneynaa in hawlwadeennada shaqadan qabtay ay dhammaantood yihiin REER NAYJEYRIYA. Waxaa lagu sameeyay Nayjeyriya, waalidiinta mataanahana umey baahan in daryeel dibadeed u kaxeeyaan” ayuu yiri Haastrup.
Dr. Haastrup, ayaa sheegay in qalliinka oo qaadan lahaa kumanyaal lacagta dollarka ah, lagu sameeyay bilaash. Waxa uu xusay in waalidiinta mataanaha aysan awoodin, maadaama ay ku tiirsan yihiin shaqooyinka aan laga helin sanuudda badan.
Kala badbaadinta mataanaha isku dheggan ma aha hawl sahlan, waa marka ay wadaagaan xubno muhiim ah balse kolka aysan wadaagin waa la kala goyn karaa.
Ka sokow inay xabadka isaga dheganaayeen mataanaha Martins waxa ay ku dhasheen xaaladda loo yaqaanno omphalocele -Mindhicirrada/Xiidmaha oo kaga dheggan dibadda xudunta.
Sawirka qaar ka mid ah kooxdii qalliinka fulisay.
“Waxa aan u baahannay in aan go’aansanno haddii ay kala noolaan karaan marka la kala jaro kadib. Waxa aan ogaannay in ay wadaageen Muruqa u dhaxeeya caloosha iyo feeraha ee loo yaqaanno DIAPHRAGM iyo waxaa ka dhaxeeyay hal BEER, balse dhamaan xubnaha kale waa kala qeybsanaayeen,” ayuu Ameh u sheegay CNN.
“Waxa aan sidoo kale u baahannay agab caafimaad oo aan horey u heysan,” ayuu ku daray.
Dhalashada mataanaha isku dheggan waa wax aad dhif u ah, waxaana lagu qiyaasaa 50 kii kun ee ilmo ah in 1 ay ka yihiin, sida ay sheegtay warbixin sanadkii 2017 lagu daabacay wargeyska caafimaadka ka faallooda ee journal of Clinical Anatomy.
Si kasta se, qiyaastii 60% ubadka xaaladahaasi leh waa dhicisoobaan, heerka celcelis ahaanna waxa uu ku dhow yahay 1 mataano ayaa isku dheggan 2 di boqol ee kun ee mataano dhasho ah. Sida ay warbixinta sheegtay 70% waa gabdho.
Pakistan: waxaan xallin doonaa khilaafaadka wadamada Iran iyo Sacuudiga
Xeer ilaalinta Puntland oo Iclaamisay waqtiga la fulinayo xukunka raggii ka dambeeyey dilkii Caasha Ilyaas